क्षेत्र नं. १ मा डा. खड्का र चौधरीको कडा प्रतिष्पर्धा, २ मा सुरेश राईको अग्रता, प्रदेशमा अग्रता कांग्रेस र एमालेको एकएक | Purnapusti Khabar
क्षेत्र नं. १ मा डा. खड्का र चौधरीको कडा प्रतिष्पर्धा, २ मा सुरेश राईको अग्रता, प्रदेशमा अग्रता कांग्रेस र एमालेको एकएक
पूर्णपुष्टि/उदयपुर, मंसीर २२ गते ।
उदयपुर प्रतिनिधिसभा १ मा कांग्रेसका उम्मेदवार डा. नारायण खड्का र बाम गठबन्धनतर्फकी एमालेकी उम्मेदवार मञ्जुकुमारी चौधरीबीचको प्रतिष्पर्धा कडा देखिएको छ ।
मतगणनाको क्रममा डा. खड्का र चौधरीले थोरै मतान्तरले अघिपछि हुदै गएका छन् । २० हजार मत गणनासम्मको अवस्थामा अग्रस्थानमा रहेका खड्कालाई त्यसपछिको अवस्थामा ४ मतको झिनो अन्तर हुदै चौधरीले ७७ मतले पछि पारेका थिए, त्यस लगत्तै खड्काले ५६ मतले पछि पारेका थिए भने त्यसपछि फेरी चौधरीले ८३ मतले पछि पारेका छन् । चौधरीको ११ हजार २ सय ६२ र डा. खड्काको ११ हजार १ सय ७९ रहेको छ । यो राती १० ः०० बजेसम्मको मतपरिणामले देखाएको विवरण हो । दुबै उम्मेदवारबीच अन्तिमसम्म नै कडा प्रतिष्पर्धाको मत देखिनसक्ने सर्बसाधारणको अनुमान छ । प्रतिष्पर्धा देखिएकाले सर्बसाधारणका लागि प्रतिनिधिसभा १ को मतपरिणाम निकै रोचक र चासोको विषय बनेको छ । डा. खड्का पूर्व शहरी विकास मन्त्री हुन् भने चौधरी शहरी विकास राज्यमन्त्री हुन् ।
उता प्रतिनिधिसभा २ मा भने बामगठबन्धनतर्फका नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रका उम्मेदवार सुरेशकुमार राई (हिमाल) अग्रस्थानमा छन् । यो राती १० ः०० बजे समाचार तयार पार्दा सम्मको अवस्थामा उहाँ २ हजार ९ सय ७० मतले अगाडी रहनुभएको छ । उहाँको १०४६६ मत प्राप्त हुदा निकटतम्रुपमा कांग्रेसका नारायणबहादुर कार्कीको ७ हजार ४ सय ९६ मत रहेको छ । निर्बाचन अभियानको क्रममा एम्बुस्मा परी घाइते हुनुभएका कार्की उपचारको क्रममा काठमाडौं रहेकाले मतदानका दिन उपस्थित हुन सक्नु भएन ।
प्रदेशसभा १ (क) मा बामगठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा एमालेका विमल कार्की अग्रस्थानमा छन् । उहाँ कांग्रेसका विदुरबाबु बस्नेत भन्दा ९ सय ६३ मतले अगाडी हुनुहुन्छ । यो उहाँको निरन्तर अग्रता हो । उहाँको ७ हजार ५ सय ६९ मत हुदा कांग्रेसका बस्नेतले ६ हजार ६ सय ६ मत प्राप्त गर्नु भएको छ ।
प्रदेशसभा १ (ख) मा कांग्रेसका उम्मेदवार हिमाल कार्की अग्रस्थानमा देखिएका छन् । उहाँ बामगठबन्धनतर्फका उम्मेदबार माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापामगर भन्दा १ हजार २६ मतले अगाडी हुनुहुन्छ । सुरुदेखिकै अग्रता देखिएका कार्कीको ९ हजार १ सय १ मत हुदा मगरले ८ हजर ७५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
मतगणनाको करिब ३० घण्टा अर्थात एकदिन एकरातमामा प्रतिनिधिसभातर्फ ४५ हजार ५ सय ९९ मत गणना भएको छ भने प्रदेशसभा तर्फ ७८ हजार २ सय ७६ मत गणना भएको छ । त्यसपछिको हिसाव गर्दा प्रतिनिधिसभातर्फको ७१ हजार ८ सय ४८ मत र प्रदेशसभातर्फको ३९ हजार १ सय ६४ मत गन्न बाँकी देखिन्छ । यहि हिसावले गणना हुने हो भने भोलीसम्ममा प्रदेशतर्फको मत गणना सकिने अनुमान गरिएको छ भने प्रतिनिसभाको गणना सकिन थप एकदिन लाग्नसक्छ ।
मुख्य निर्बान अधिकृत जेतेजन्द्रप्रसाद शर्माका अनुसार प्रत्यक्षतर्फको मतगणना पश्चात समानुपातिकतर्फको मत गणना हुने राजनीतिक सहमति बनेको छ ।
सञ्चारकर्मीलार्ई तुरुन्त जानकारी
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणनाको जानकारी सञ्चारकर्मीलाई तुरुन्तै जानकारी दिन इमेलको गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्बाचन क्षेत्र नं. १ को सम्पूर्ण मतपरिणाम र निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आप्mनो क्षेत्रको मतपरिणाम अध्यावधिक तुरुन्तै इमेल गरिदिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काका अनुसार छ वटा मतगणना कोठामा रहेका कम्प्युटर अपरेटरहरुले मतगणनास्थलबाटै तत्कालै सञ्चारकर्मीहरुको मेलमा पठाइदिने गरिएको छ । मेलको व्यवस्था गरिएकोले सञ्चारकर्मीहरुलाई कार्यालयमै बसेर पनि अपडेट समाचारलाई सजिलो भएको छ ।
यस्तो व्यवस्था गरिएपछि सञ्चारकर्मीहरु मत गणनाको भिडियो तथा फोटोका लागि र केही समय सञ्चार अनुगमनमा मात्र जादा पुग्ने भएको छ ।
मतगणना कोठामा सिसि क्यामेरा जडान
उदयपुरको मतगणना कार्य सिसि क्यामेराको निगरानीबाट भईरहेकोछ । मत गणना भईरहेको छ वटै कोठाहरुमा सिसि क्यामेरा जडान गरिएको छ । अन्य ३ ओटा कोठा स्टोर, १ ओटा सिसि क्यामेरा कन्ट्रोलरुप रहेको छ ।
मूख्य निर्वाचन अधिकृत तेजेन्द्रप्रसाद शर्माले मतगणना कार्यलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सिसि म्यामेरा जडान गरिएको छ ।
स्थानीय प्रशासन, मूख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला निर्बाचन, सुरक्षा निकायहरुको समन्वयबाट मतगणनालाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सिसि क्यामेरासमेत जडान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सिसि क्यामेराको मद्दतबाट सम्बन्धीत अधिकारीहरुले मतगणना कार्यको निगरानी, अनुगमन सहजरुपले गर्नसक्ने र कुनै वादविवाद वा समस्या आएमा सहजिकरण गर्न सजिलो हुने बताइएको छ ।